Pep Guardiola Oo Si Cadho Leh U Saadaaliyay Cida Ku Guulaysan Doonta Abaal Marinta Xidig Sanadka Ee Premeir League Ugu Fiican. - Gool24.Net
Pep Guardiola Oo Si Cadho Leh U Saadaaliyay Cida Ku Guulaysan Doonta Abaal Marinta Xidig Sanadka Ee Premeir League Ugu Fiican.
Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaan aaminsanayn in xidiga kooxdiisa ee Kevin De Bruyne aanu ku guulaysan doonin abaal marinta laacibka sanadka ee ay bixiyaan xidhiidhka qorayaasha kubbada cagta England ee Football Writers’ Association.
Guardiola ayaa fariin ku ganay kooxda Liverpool wuxuuna tilmaamay in markii ay Manchester City ku guulaysatay koobka Premeir League in ay ciyaartoyda Reds abaal marintan hanteen isla markaana uu hadda hubo in ciyaartoy Reds ahi uu abaal marintan ku guulaysan doono maadaama oo ay koobka hanteen.
Guardiola ayaa si cad ugu muuqda in uu aaminsan yahay in gar iyo gardaraba ay xidhiidhka qorayaasha kubbada cagta England ay abaal marintooda xidiga sanadka ee Premeir League ugu fiican la jecel yihiin Liverpool.
Guardiola ayaa si cadaan ah ugu dooday in abaal marinaha shaqsiga ee kubbada cagta England ay yihiin kuwo loo diyaariyay kooxda ay xifiltamaan ee Liverpool.
Kevin De Bruyne iyo Raheem Sterling ayaa ah labada xidig ee abaal marinaha ugu muhiimsan kula tartamaya Sadio Mane, Jordan Henderson iyo Virgil Van Dijk oo loo arko saddexda xidig ee ugu cad cad abaal marinta xidiga sanadka ee Premeir League iyo abaal marinta qorayaasha kubbada cagta England.
Pep Guardiola oo ka hadlaya cida ku guulaysan doonta abaal marinta xidiga sanadka ee xidhiidhka qorayaasha kubbada cagta ayaa yidhi: “Guulaystuhu waxa uu noqon doonaa ciyaartoy Liverpool ka imanaya”.
Laakiin Guardiola oo muujinaya sida aanu arintan ula dhacsanayn ayaa yidhi: “Markii aanu ku guulaysanay horyaalka waxaa ku guulaystay ciyaartoy Liverpool ah,marka ay ku guulaysteen horyaalka, anigu aad ayaan u hubaa in ay iyagu ku guulaysan doonaan ciyaartoyga xili ciyaareedka ugu fiican”.
Intaas kadib Guardiola ayaa cadhadiisa heer kale u qaaday wuxuuna yidhi: “Abaal marinahaasi waxaa markastaba iska leh Liverpool”.
Laakiin waxaa dhawaan la ogaan doonaa haddii Guardiola uu ku saxan yahay hadalkiisan maadaama oo De Bruyne uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu cad cad ee sanadkan ku guulaysan kara abaal marinaha ugu muhiimsan.